Maxay tahay sababta doorashada UNWTO ay walaac degdeg ah ugu noqdaan UN iyo madaxda dowlad goboleedyada?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Daalacanayo Hadda » Maxay tahay sababta doorashada UNWTO ay walaac degdeg ah ugu noqdaan UN iyo madaxda dowlad goboleedyada?
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Faallo • Wararka Dowladda • News • Dib-u-dhiska • Wararka Spain • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Yaanay noqon dalxiis kii inqilaabka u gudbiya nidaamka Qaramada Midoobay!
Dalxiiska ayaa udub dhexaad u ah sawirkan laba sababood dartood.
Inqilaab lagu sameeyay nidaamka Qaramada Midoobay
Faafida ayaa wiiqday nidaamka Qaramada Midoobay, iyada oo door biday soo ifbaxa siyaasadaha inta badan, haddii aysan ahayn oo keliya, ku jihaysan heer qaran.
Ururka Ganacsiga Adduunka, ayaa wajahaya codsiga Hindiya iyo Koonfur Afrika si ay u xoreeyaan wax soo saarka tallaalada, ma awoodin inay wax ka qabtaan iyada oo ay jirto taageerada xad dhaafka ah ee xubnaheeda intooda badan, sababtoo ah habka la isku raacay.
Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa bartilmaameed u noqday dhaleecayn iyo weerarro, kuwaas oo asalkooda laga soo xigtay dhibaatooyinka siyaasadeed ee gudaha qaar ka mid ah xubnahooda.
Baaqyada tallaalka ballaaran ee wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo ayaa ku dhacay dhego-la'aan. Tirada tilmaamaysa in shan ama toban waddan ay tallaaleen 75 ama 80% dadkooda, ayaa xasilloon muddo bilo ah inkasta oo xoghayaheeda guud uu si joogto ah ugu yeedhay mid aan la aqbali karin.
Maanta, tiradani waa isbedeshay, sidoo kale waxaa sabab u ah horumarrada laga sameeyay qaar ka mid ah waddamada tirada badan, laakiin xaaladda Afrika ayaa weli ah mid welwel leh, sida uu dhawaan dib u soo celiyay agaasimaha ururka ee Afrika.
Codsiyada Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaan wax wanaagsan ka gaarin.
Dhanka kale, waxaa la diiwaan geliyay ku dhawaaqida kooxaha ugu qanisan iyo/ama ugu badan ee wadamada warshadaha leh ee shirarkooda xilliyeedka ah, taas oo kaliya qof rajo leh oo wax qabad leh uu qiimeyn karo inay u fiirsanayaan dhibaatooyinka wadamada horumarkoodu yar yahay.
Ilaa iyo inta laga hadlayo masiibada, tani waxay u badan tahay inay door biday soo bixitaanka noocyo cusub oo fayras ah.
Natiijada aadka u xaddidan ee COP26 waa calaamad kale oo muujinaysa xilliga aan wanaagsanayn wada-noolaanshaha caalamiga ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira sababo badan oo juqraafiyeed oo lagu xoojinayo xiriirka caalamiga ah. Waxaa ka mid ah ganacsiga, socdaalka, xasilloonida gobolka, iyo dhaqaalaha adduunka, oo uu saameeyay, in kastoo juqraafi ahaan iyo waax ahaanba aan sinnaan lahayn, oo uu saameeyay masiibada.
Midda koowaad waa wax ku biirinta GNP adduunka. Faafida ka hor, waxay ahayd ku dhawaad ​​10%, haddana waxaa laga dhigay 5%, taasoo saameyn aan toos ahayn ku yeelatay isticmaalka iyo qaybaha jaamacadaha. Soo kabashadooda waxay ku jirtaa ajendayaasha dhaqaale ee dalalka oo dhan, laakiin wadamada qaarkood, gabi ahaanba waa lama huraan, maadaama dhaqaalahooda uu ku dhow yahay hal-ku-tiir, oo wax ku biirintooda GNP ilaa 30%.
Tani waxay ka dhigeysaa mid muhiim ah in ururkooda adduunku uu noqdo mid xooggan oo u nugul dhibaatooyinka kala duwan ee warshadani soo bandhigto iyadoo ku xiran sifooyinka dalalka. Way fududahay in loo soo jeediyo waddamada sida Ruushka ama Maraykanka, ama xitaa meelaha ugu waaweyn ee loo dalxiis tago ee Yurub, si ay u taageeraan dalxiiska gudaha, laakiin waxa ay noqon doontaa wax lagu qoslo in loo malaynayo in cabbirka noocaas ahi uu u adeegi karo dalal ay ka mid yihiin Seychelles, Saint Lucia, ama Fiji
Laakiin wakhtigan, dalxiisku sidoo kale wuxuu noqon karaa arrin muhiim u ah xasiloonida nidaamka Qaramada Midoobay sababtoo ah xaalad - Golaha Guud ee soo socda ee UNWTO, Ururka Dalxiiska Adduunka.
Ajandihiisa ayaa ah magacaabida Xoghayaha Guud ee afarta sano ee soo socota.
Golaha Fulinta ee muranka badan dhaliyey, ayaa labadii Xoghaye Guud ee hore ku andacoodeen in lagu takri-falay si meesha looga saaro tartanka ololaha.
Soo jeedinta Golaha Fulinta ee ah in dib loogu magacaabo Zurab Pololikashvili waa in lagu ansixiyo 2/3 ee Dawladaha Xubnaha ka ah ee ka qayb galaya Shirka Guud.
Shuruuddani waxay ka timid qaanuun, lagu aasaasay 1978 Buenos Aires, kaas oo dejinaya labada shuruudood ee doorashada Xoghayaha Guud ee aqlabiyadda iyo codbixinta qarsoodiga ah.
Labada xeerba waa kuwo ku dhisan macnaha guud. Haddii mid la weydiiyo, ma jirto sabab loogu maleeyo in kan kale uu ka sareeyo oo aan la is weydiin karin.
Tani waxay soo jeedinaysaa difaacidda iyo ixtiraamka iyaga si ay dammaanad ugu noqoto nadaafadda hawlaha ugu muhiimsan ee hay'adda Qaramada Midoobay. Si kastaba ha ahaatee, dacaayado hoosaadyo ayaa lagu soo bandhigay website-ka ururka doorashada oo ah in la ansixiyo oo kaliya, waxaana la isku deyayaa shirweynaha soo socda, waxaa la xasuusiyay in ay dhaqan ahaan lahayd in aan cod sir ah lagu qaadan karin, haddii aan waddan is qaawin mooyaane. codso.
Sidoo kale, dhawaaqa hanjabaadda ah ee aan khatarta ahayn ee lagu tilmaamayo xaaladda xakamayn la'aanta ururka haddii ay dhacdo ansixin la'aantu waxay ku reebi kartaa xoogaa wareer ah akhristaha aan caqli-gal ahayn.
Miyaanay ahayn kuwa doonaya inay ka baxaan xeer jira inay masuuliyadooda qaadaan oo ay wajigooda soo bandhigaan iyagoo codsanaya bogaadin?
Tani waxay u baahan doontaa shirweyne la heli karo, sidaas darteed way u fududaatay Xoghaynta inay dib u xasuusato dhaqankii la ilaaway in ay sidoo kale jirtay arrin aan fiicneyn oo ka noqoshada musharaxiinta, taas oo qofka wax qora, sarkaal hore oo UNESCO ah uu ugu yeeray inuu xasuusto sidoo kale nebulous. ka noqoshada musharaxa kaliya ee Latin America ee doorashada 2017 ee UNESCO.
Dooda Guddida U Dooda WTN
Murrashaxa ay soo jeediyeen guddiga fulinta ayaa maanta dood ka dhacday, oo ay soo qabanqaabisay guddiga u doodista ee shabakadda Dalxiiska Adduunka (WTN), oo aan ka qeyb galay.
Waxay ahayd dood aad isu dheeli tiran, taas oo baahida loo qabo doorashada Xoghayaha Guud ee UNWTO si loo xaqiijiyo hufnaanta iyo daacadnimada mabaadi'da ku xiran dhammaan shaqaalaha rayidka ah ee Qaramada Midoobay.
Tani waa inay u baahan tahay caddaynta odhaahyada ugu dambeeya ee walaaca leh (qodobada 48-50) ee Warbixinta Sannadlaha ah ee Sarkaalka Anshaxa, lifaaqa 1 ee Warbixinta Khayraadka Dadweynaha, iyo sida loo qabtay ololaha doorashada ee saxda ah ee musharraxa lagu taliyey, taas oo fiiro gaar ah loo yeelan karo. iyada oo laga eegayo eex suurtagal ah oo ku iman karta barnaamijka booqashooyinkiisa rasmiga ah, gaar ahaan inta lagu jiro sanadka 2019, arrinta ay u badan tahay in dalalka xubnaha ka ah ee ay illowday UNWTO ay u nugul yihiin.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka saameyn kara natiijada codbixinta ayaa ah in la go'aamiyo (miyay ku jirtay awooddeeda?) Ka dib markii Morocco ay ku dhawaaqday in aysan awoodin inay martigeliso shirka sababtoo ah masiibada (ugu yaraan Marrakech, waxaa habboon in la caddeeyo) , Isla sidaas oo kale ayaa lagu qaban lahaa Madrid, iyada oo iska indhatiraysa dalabka Kenya, taas oo marka laga eego aragtida ururka aysan soo bandhigin dhibaatooyin iyo faafitaanka cudurka ayaa aad uga wanaagsan Madrid.
Waxaa jira dad u maleynaya in taasi ay u xaglinayso musharaxa la soo jeediyay, laakiin taasi ma dhacayso haddii laba shuruudood la buuxiyo, oo ah karti-xirfadeedka Shirweynaha Guud: in la aqbalo in fadhiga gaarka ah ee lagu dooranayo Xoghayaha Guud uu noqon karo mid isku dhafan. fool-ka-fool- fool-ka-fool ah, oo dammaanad qaadaya sirta codbixinta, iyo awoodda kale ee dalalka xubnaha ka ah.
Doorasho muran badan dhalisay kaliya ma burburin karto UNWTO laakiin waxay sidoo kale inqilaabka u gudbin kartaa nidaamka Qaramada Midoobay.
Arrintu maaha mid khusaysa Wasiirada Dalxiiska iyo xataa in ka yar danjirayaasha wadamada wakiil ka ah Madrid, laakiin waxay khusaysaa kuwa haya awooda fulinta.